cà borgo vecchio NON TI SCORDAR DI - I-Airbnb
Indawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu enesilingi eziphakamileyo, iinkuni zine-bolcone ende enemibono emangalisayo yeenduli zethu. Iquka igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlala elikhulu elinekhitshi elixhotyisiweyo kunye nebhedi yesofa yabantu aba-2, igumbi lokuhlambela elikhulu elineshawari.
Kwilali encinci, yamandulo ephakathi efihliweyo kwiinduli zaseMonferrato, emva kokubuyiselwa okude kunye nokucokisekileyo, sivula i-Ca yethu phakathi kweendonga zedolophu endala. Amafulethi amane anobukhulu obahlukeneyo ukuvumela iimpelaveki ezimbini zothando, iiholide zosapho okanye amaxesha akhethekileyo nabahlobo.
Indawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu enesilingi eziphakamileyo, umthi unebholcone ende enombono omangalisayo phezu kweenduli. Ibandakanya igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlala elikhulu elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nebhedi yesofa yabantu aba-2, igumbi lokuhlambela elineshawa. Indlu ixhotyiswe ngomabonakude wesathelayithi, ibhokisi yentambo okanye iDVD player xa iceliwe. Impahla yexabiso elikhulu, iifestile ezinezikrini.
Indawo, nangoku phantse ayaziwa, cwaka kwaye imilingo njengoko ubuncinane igama lakhe: Cristina and Maximilian, emva kokuba ukubuyiselwa ixesha elide nangocoselelo wavula Ca wabo phakathi masimu yedolophu endala, kwaye zithembisa iindwendwe zabo i exabisekileyo, amathuba azizityebi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brusasco